Displaying 76 - 90 of 289 results
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း (သားရဲ) ထပ်ဆောင်းအခွန်များနှင့်အခများအပါအဝင် စျေးနှုန်းထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ F69 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့်စပ်ဆက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (အသားနှင့် ထွက်ကုန်) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P43 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင် သည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာများနှင့်စပ်ဆက်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (သားရဲ) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P43 This measure (Chapte ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် The Animal Health and Development Law is issued by the Ministry of Agriculture, Livestock Breeding and Irrigation. This measure may be changed according to the country’s condition.
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အတည်ပြချက်ရယူရန်လိုအပ်ချက် (အသားနှင့် ထွက်ကုန်) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P13 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရ ပြောင်း လဲနိုင် သည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် တိရစ္ဆာန်အစာကိုပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ အတည်ပြချက်ရယူရန်လိုအပ်ချက် (သားရဲ) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P13 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် တိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေကိုစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့မှုအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (ကျွဲ၊ နွား) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P43 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တင်ပို့တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများကို စစ်ဆေးခြင်း (ကျွဲ၊ နွား) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P181 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့မှုအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (ကြက်ပေါက်အရှင်) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P43 ကြည့်ရန် ပုံနှိပ်နှင့်ထုတ်ဝေရေးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။ဤစီမံဆောင်ရွက်မှုသည် နိုင်ငံ၏အခြေအနေအရပြောင်းလဲနိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့မှုကို သတ်မှတ်အကောက်ခွန်စခန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် (ကျွဲ၊ နွား) ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တင်ပို့တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများကို စစ်ဆေးခြင်း (ကြက်ပေါက်အရှင်) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P181 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်များ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာတင်ပို့မှုအတွက် ထောက်ခံချက်လိုအပ်ချက် (ကျွဲ၊ နွား) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P183 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်ပို့မှုကို သတ်မှတ်အကောက်ခွန်စခန်းမှ ဆောင်ရွက်ရန် (ကြက်ပေါက်အရှင်) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P21 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများကို စစ်ဆေးခြင်း (ကျွဲ၊ နွား) လူ၊ တိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်တို့၏ ကျန်းမားရေးနှင့်ပိုမွှားရောဂါကင်းစင်သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှု A82 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်များ၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာတင်ပို့မှုအတွက် ထောက်ခံချက်လိုအပ်ချက် (ကြက်ပေါက်အရှင်) ပို့ကုန်နှင့်ဆက်စပ်သောစီမံဆောင်ရွက်မှုများ P183 ကြည့်ရန် ပုံနှိပ်နှင့်ထုတ်ဝေရေးဌာန ပို့ကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၆/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။
တိရစ္ဆာန်၊ တိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းနှင့် တိရစ္ဆာန်အစာများတင်သွင်းမှုအပေါ် အခကြေးငွေကောက်ခံခြင်း (ကျွဲ၊ နွား) ထပ်ဆောင်းအခွန်များနှင့်အခများအပါအဝင် စျေးနှုန်းထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာစီမံဆောင်ရွက်မှုများ F69 ကြည့်ရန် မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန သွင်းကုန် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၀၅ ကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ပါသည်။